को हुन् उमेश कुमार यादव ? - News Today
को हुन् उमेश कुमार यादव ?
राजविराज । बाल्यकालदेखि शोषण, दमन र अन्यायको विरुद्धमा खरो रुपमा उभिदै आएका पात्र हुन् उमेश कुमार यादव । सप्तरीको लालापटी गाविस वडा नम्वर– १ निवासी यादव २०७० सालको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा एकिकृत नेकपा माओवादीवादीबाट उम्मेदवार भई सप्तरी क्षेत्र नम्वर– ३ बाट संविधानसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् । उमेरको हिसावले समेत हालसम्म सबभन्दा कान्छो सभासदको रुपमा निर्वाचित यादवको जन्म भारदह गाविस स्थित मावली भलुवा गाउँमा वि.सं.
२०२८ साल फाल्गुन ३० गते भएको हो । पिता स्व. किसुनदेव यादव र माता लक्ष्मी देवी यादवको कोखबाट जेठो सन्तानको रुपमा धर्तीमा पाईला टेकेका उनी बाल्यकालदेखि नै सहपाठीहरुले गल्ती गर्दा त्यसको खरो रुपमा प्रतिवाद गर्दथे ।
आफूसहित चार दाजुभाइ र एक बहिनीको अभिभावकत्वको जिम्मेवारी सम्भाल्दै आएका उनले गाउँकै राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयमा प्राथमिक तह पुरा गरी वि.स. २०४४ सालमा राजविराज स्थित राजदेवी माध्यमिक विद्यालयबाट एसएलसी पास गरे । राजनीतिसँगै भारतको मधेपुराबाट प्रविणता प्रमाणपत्र तह उतिर्ण गरेका छन् ।
वि.सं. २०३९ सालताका काठमाण्डौको गोटीखेल ललितपुरमा शिक्षण पेशामा कार्यरत काका रामदेव यादवसँग उनी पढ्नका लागि काठमाण्डौ पुग । त्यहाँका बासिन्दाहरुले देउसी भैलो खेलेर सङ्कलन भएको रकमबाट कक्षा ३ बाट सञ्चालन भएको विद्यालय १० सम्म सञ्चालन गरेको कुराले उनी प्रभावित भए । आफ्नो गाउँ ठाउँको विकास आफैले गर्नुपर्छ भन्ने सङ्कल्पका साथ गाउँ फर्के प्रा. चन्द्रकिशोर यादव, ईन्जिनियर प्रयाग यादव, कामेश्वर यादव, हरिनारायण यादव, विष्णुदेव यादव लगायतका कर्मचारीहरु समेतको अगुवाइमा क्लव सञ्चालन गरे । गाउँका सरकारी कर्मचारीहरुले कमाइको केही अंश क्लवमा जम्मा गरेर गाउँमा विकासीय अभियान चलाए । यद्यपी गाउँकै केही विकास विरोधी व्यक्तिहरुका कारण भर्खर–भर्खरका किशोर उमेशको अभियानले मूर्त रुप लिन सकेन ।
राजदेवी माध्यमिक विद्यालयबाट वि.सं. २०३९ सालमा एसएलसी दिएर पुनः गाउँ फर्केर सहपाठीहरु सङ्गठित गरी विकास निर्माण लगायत सार्वजनिक कामहरुलाई उनले अगाडी बढाए । विन्देश्वर यादवको दलानमा बसेर सरस्वती नाट्य कला परिषद गठन गरि ‘इन्सान’ नामक हिन्दी नाटकमा नोकरको भूमिका निभाए । त्यतिबेला सबैले राम्रा–राम्रा पात्रको भूमिका गर्ने जिम्मेवारी सहपाठीहरुले लिए तर उमेशलाई भने कसैले पनि लिन नचाहेको नोकरको भूमिका दिईयो । उनले नाइँ नभनी सहर्ष स्वीकार गरे । उमेशले नोकरको भूमिकामा उत्कृष्ट अभिनय निभाए । त्यसपछि त उनको उक्त अभिनयले लालापट्टी, सखडा, छिन्नमस्ता लगायतका गाउँहरुमा निक्कै चर्चा पायो ।
गाउँघरमा व्याप्त रहेको सामन्ती प्रवृति, मालिक प्रथा, धनी र गरिव बिचको असमानता, जातीय विभेद, शोषण दमनका कुराहरु उनको दिमागमा नाचिरहन्थ्यो । गाउँका धनी व्यक्तिहरु बसीबसी गरिब एवम् विपन्न व्यक्तिहरुमाथि शासन चलाउने प्रवृती तथा गरिबहरु जतिसुकै श्रम र पसिना बगाए पनि साँझ विहानको छाँक टार्न कठिन हुने दारुण अवस्थाको उनले त्यतिबेलादेखि नै विरोध गर्न थाले ।
रामकुमार यादव ( हाल पंडित भोरुकवा एफएम), सम्पैत डाक्टर, शम्भु यादव, राजकुमार यादव सहितका व्यक्तिहरु सङ्गठित भई हतियार किनेर दमनकारीहरु विरुद्ध जाई लाग्ने योजना बनाए । त्यतिबेला सीमापारी पाँच सय रुपैयाँमा थ्री नट पाईन्थ्यो । तर उनीहरु भर्खर–भर्खरका युवा भएका कारण उनीहरुसँग त्यति पैसा थिएन । समूहकै केही साथीले भने पाँच सय रुपैयाँ व्यवस्था गर्न विभिन्न योजना बनाए । यद्यपी उनीहरुको योजनाले त्यति मूर्त रुप लिन सकेन । उनको मनमा भने शोषण दमन विरुद्ध आगो दन्की रह्यो ।
वि.सं. २०४५ सालमा राजविराज स्थित महेन्द्र विन्देश्वरी क्याम्पसमा आइएससी पढ्न आए । सोही क्रममा हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता आयोजना भयो । उमेशको नेतृत्वमा रहेको समूहले बीएल समूहका विद्यार्थीहरुलाई पराजित गरिदिए । तर अन्त्यमा थप प्रश्न राखेर आफूहरुलाई दोस्रो घोषित गरिदिए पछि पुरस्कार नै वहिष्कार गरिदिए । सोही विषयलाई लिएर उमेश पोखरेल र ईश्वर बिसी बीच विवाद समेत उत्पन्न भएको उनको सम्झना छ ।
वि.सं. २०४६ सालको जनआन्दोलनताका निर्दल बहुदलको आन्दोलन चलिरहेको थियो । त्यतिबेला उनी सरस्वती टोलमा देबु यादवको घरमा डेरा लिएर बसिरहेका रहेका थिए । रातीको समयमा सुरक्षा निकायका व्यक्तिहरुले विभिन्न प्रलोभन दिएर ‘पञ्चायती व्यवस्था जिन्दावाद’ भनि नारा लगाउन व्यापक रुपमा दवाव दिईरहे तर उनले सिधै अस्वीकार गरे ।
राजदेवी मन्दिरमा आयोजित एक कार्यक्रममा आईएससीमा अध्ययनरत विद्यार्थीको तर्फबाट भाषण गरेपछि महिला नेतृ रेणुकुमारी यादव उनमा रहेको राजनीतिक चेतना र तर्क शैली देखेर प्रभावित भइन् । तत्पश्चात उमेश उनीसँगै राजनीतिक क्षेत्रमा काम गर्न थाले । वि.सं. २०४८ सालको निर्वाचनमा उनले रेणुु यादवलाई भ्याएसम्म सहयोग गरे ।
बीएससी अध्ययनका लागि उनी काठमाण्डौ स्थित पाटन क्याम्पसमा भर्ना भए । मधेशबाट राजधानी छिरेका विद्यार्थीहरुसँग गरिने विभेदपूर्ण व्यवहारबाट गाउँ–देहातको सुरिलो आँटिलो ठिट्टो उमेशको मनले सहेर बस्न मानेन । काठमाण्डौमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई भेला गरी तराई विद्यार्थी समन्वय परिषद् गठन गरे ।
मधेशी मूलका विद्यार्थीहरु सङ्गठित भएको कुरा त्यहाँका पहाडे मूलका विद्यार्थीहरुलाई पाच्य भईरहेको थिएन । क्याम्पसमा आयोजित कार्यक्रममा तराई विद्यार्थी समन्वय परिषद्को तर्फबाट उमेशलाई बोल्न मञ्चमा बोलाइयो । उनले मन्तव्यका क्रममा थानकोटभन्दा बाहिर पनि नेपाल छ, यो मनोविज्ञान पनि तपाई बुझिदिनुस् भन्न नपाउँदै त्यहाँका मधेश विरोधीहरुले मञ्चमै जुत्ता चप्पल प्रहार गरे । त्यसपछि उनमा आक्रोस र पीडासँगै राजनीतिको भूत तीब्र रुपमा सवार भयो ।
स्ववियू निर्वाचन नजिकिँदै गएकोले पुल्चौकमा मिटिङ्ग बसेर तराई विद्यार्थीको तर्फबाट उम्मेदवारीको निर्णय गर्दै परिषद्को तर्फबाट शिवराम यादव ( पूर्व सभासद ) र उपेन्द्र ठाकुरलाई उम्मेदवारी दिन लगाए । शिवराम सर्वाधिक मत प्राप्त गरेर विजयी पनि भए ।
तराई विद्यार्थी समन्वय परिषद् राजधानीमा बलियो हुँदै गयो । सोही क्रममा सद्भावना पार्टीको बीरगञ्जमा सम्पन्न सम्मेलनमा नेपाल विद्यार्थी मञ्चको उपत्यका संयोजकको हैसियतमा समेत उनी सहभागी भए ।
वि.सं. २०५१ सालमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट साँसद पदमा रेणुले उम्मेदवारी दिँदै भ्याएसम्म उनले मदत गरे । पार्टीको युवक सङ्गठनको जिल्ला अध्यक्ष, सगरमाथा अञ्चल ईञ्चार्ज हुँदै केन्द्रीय सदस्य समेत भए । पार्टीका नेता राजेश्वर देवकोटा समेत उमेशको शैलीबाट प्रभावित हुँदै गए । देवकोटाले उमेशलाई युवा कार्यकर्ताको रुपमा नभई छोरा भनेर बोलाउँथे भने उमेशले समेत बुवा भनेर आदर गर्दथे ।
वि.सं. २०५२ सालताका उमेश राजनीतिको रङ्गमा रङ्गीसकेको भए पनि घरको आर्थिक अवस्थाले साथ दिईरहेको थिएन । घरबाट चामल र पैसा ल्याएर राजनीति गर्दैआएका कारण उनलाई घरबाट समेत कमाउनका लागि दवाव दिन थालियो । त्यतिबेला राजनीति नै छोडिदिउँ कि जस्तो लागिरहेको थियो । उनलाई नेता राजेश्वर देवकोटाले अमेरिका पठाइदिन्छु भनि काठमाण्डौ बोलाए । अमेरिका कमाउन गईयो भने राजनीतिक यात्रा तथा समाज परिवर्तन गर्ने अभियान रोकिने हो कि भन्ने सोच बिचार गरेर अमेरिका नजाने निधोमा पुगे ।
राजविराज–६ स्थित गौतम शिशु सदनमा शिक्षकको रुपमा काम गरेर तथा आइएससीका विद्यार्थीलाई टियुसन पढाउन थाले । यद्यपी उनको राजनीतिक यात्रा भने जारी रह्यो । नेपालमा माओवादी जनयुद्धले गति लिईरहेकै क्रममा माओवादी नेता मातृका यादव सप्तरी आएका थिए । राजविराज स्थित पब्लिक विन्देश्वरी उच्च माध्यमिक विद्यालयमा गोप्य बैठक आयोजना भएको थियो । महेन्द्र पासवान, राधेश्याम पंडित सहितका नेताहरु विद्यार्थी नेता केदारको घरमा आउँथे । सोही क्रममा उमेशको पनि माओवादी जनयुद्धका गतिविधिहरुमा सामिप्यता बढ्दै गयो ।
राप्रपाबाट विस्तारै टाढिदै उनी पर्चा, पम्पलेट छर्ने, भित्ते लेखन गराउने जस्ता कार्यमा सक्रिय भए । पार्टीको गतिविधीहरुमा सक्रिय भई ईमान्दारीपूर्वक काम गर्नथालेपछि उमेशलाई माओवादीको भातृ संगठन मधेशी राष्ट्रिय मुक्तिमोर्चाको गाउँ कमिटी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिईयो । तत्पश्चात पार्टीको सेल कमिटि सेक्रेटरी, एसिएम, डिसिएमको जिम्मेवारी पाए ।
शम्सेरपुर धातीमा वि.सं. २०५८ सालमा सम्पन्न मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको जिल्ला सम्मेलनबाट सूर्यनाथ यादव अध्यक्ष भए भने उमेशले उपाध्यक्षको जिम्मेवारी पाए । ०५८ मंसीर ११ गते तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले संकटकाल घोषणा गरे पछि निक्कै जोखिमपूर्ण कामहरु समेत उनले पार्टीको निर्देशन अनुसार गरे ।
ईमान्दार भई काम गर्ने क्रममा उनी एरिया हुँदै जनसरकार प्रमुख, जनमिलिसिया कमिसार, जिल्ला जनमुक्ति सेना कम्पनी हुँदै बटालियन कमिसार, वाईसिएल केन्द्रीय सदस्य एवम् धनुषा अध्यक्ष, धनुषा महोतरी, सर्लाही ईञ्चार्ज, वाइसिएल मिथिलाराज्य संयोजकको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गरे । उनी पार्टीभित्र छोटो समयमै प्रभावशाली नेताको रुपमा परिचित भए । पार्टीको जिल्ला संयोजक हुँदै वि.सं. २०६९ सालमा पार्टीको केन्द्रीय सदस्य समेत भए ।
भूमिगत रहँदा उनले बडो कुशलतापूर्वक जिम्मेवारी सम्हाल्नुका साथै जनताको सरोकारका साथै विकट गाउँहरुमा बाटो बनाउने, कुलो पैनी खन्ने, नयाँ बाटो निर्माण गर्ने, वर्षौंदेखिको पूराना विवादहरु समाधान गर्ने, सर्वहारा एवम् श्रमिकवर्गको हक, अधिकार र पहिचान स्थायित्वका लागि विभिन्न गतिविधिहरु गर्नुका साथै जनसरकार प्रमुख रहँदाकै अवस्थामा सप्तरीको स्वर्णपट्टीमा सर्वसाधारण जनताका छोराछोरीको समेत शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धिका लागि महान शहीद राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय समेत स्थापना गरे । भूमिगतकालमा उनले जिल्लाका कानूनव्यवसायी, अधिकारकर्र्मी, सञ्चारकर्मी, शिक्षक, बुद्धिजीवि, व्यापारी, नागरिक समाजका अगुवाहरुलाई गोप्यस्थानमा बोलाएर सल्लाह, सुझाव लिनुका साथै कुशलतापूर्वक आफ्ना कुरा राख्ने गर्दथे ।
वि.सं. २०६२ ÷०६३ को जनआन्दोलनमा जिल्लाको पश्चिमी भेगबाट जनतालाई आन्दोलनमा दैनिक रुपमा हज्जारौं जनालाई पठाउने गर्दथे । टाउकामा कात्रो बाध्न लगाएर ग्रामिण भेगका जनताहरु सदरमुकाम राजविराजमा प्रदर्शन गरेपछि आन्दोलनले गति लिएको थियो ।
वि.सं. २०५५ सालमा भारतको बेला गाउँमा सुलेखा यादवसँग वैवाहिक बन्धनमा बाँधिएका उनलाई यहाँसम्मको यात्रा तय गर्न निक्कै संघर्ष गर्नुपर्यो । पत्नी सुलेखाले शुरुका दिनमा जनयुद्धमा नजान आग्रह गरे पनि पछि उनले निक्कै सहयोग गरेको उनले बताए । घरको जिम्मेवारी पत्नी सुलेखाले सम्हाल्ने क्रममा कैयौ रात लालाबाला भोकै सुतेको क्षण समेत उनी सम्झिन्छन् । ईमान्दारिता र सिद्धान्तको रट लगाउँदै आएका युवा उमेशले कहिले पनि जिन्दगीबाट हार मानेनन् । उनी आफू स्वयं कैयौ रात भोकै रहँदा पनि माग्ने वा धम्क्याएर व्यक्तिगत रुपमा लाभ लिने काम समेत गरेनन् ।
सप्तरी क्षेत्र नम्वर ३ बाट २०६४ सालमा संविधानसभा सदस्यमा चुनाव लडे पनि पराजित भए तर हिम्मत हारेनन् । जनताको अभिमतलाई कदर गर्दै जनताको घरदैलोमा गएर धन्यवाद दिए । यतिमात्र होईन, उनले व्यापक पहल गरेर सप्तरी जिल्लामै पहिलो पटक एक दर्जनभन्दा बढी स्थानमा झोलुंङ्गे पुल निर्माण गराए । यसबाहेक जनताको सुखदुःखमा जतिबेला पनि उनी साथ दिईरहे ।
अधिकांस समय जनताकै झुपडीमा बिताउने उमेश जनयुद्धकालमा सहादत दिएका अजवलाल बादल, विवेक, दशरथ, डम्बर, गोविन्द, रमेश, आइडी लगायतका सहयोद्धाहरुको अभाव आफूले महशुस गर्ने गरेको बताउँछन् । संविधानसभा सदस्यमा आफूलाई सप्तरीवासीले दिएको अभिमतको कदर गर्दै जनताकै लागि काम गर्ने उनको प्रतिवद्धता रहेको छ । ‘ग्रेट सप्तरी बेस्ट सप्तरी, ग्रीन राजविराज क्लिन राजविराज, अपन गाम सुन्दर ठाम’ भन्ने नाराका साथ विकास निर्माण सम्वन्धी कामलाई अगाडी बढाए ।
संविधानसभा सदस्यमा निर्वाचित भए पनि जनताकै माझमा रहेर जनताका लागि काम गर्ने उनको संकल्प छ । यो काम वा त्यो काम गर्ने भनि झुटा आश्वासन बाँड्नुभन्दा काम गरेर देखाउने उनको धारणा रहेको छ । सभासद बनाएर सप्तरीवासीले काँधमा जिम्मेवारी थपेर संविधान भवनमा शोषित उत्पीडित जनताको आवाज बुलन्द गर्न पठाएको भन्दै त्यसलाई कदापि नबिर्सने उनले बताए ।
संविधानसभा सदस्यमा निर्वाचित भएपछि उनले सप्तरी जिल्लामा विकास निर्माण सम्वन्धि कामलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएका छन् । संविधानसभा भवनमा उनको आक्रोशले उग्र रुप लिएको थियो । संविधानसभा भवनमा कुर्सी तोडफोडमा संलग्न भएपछि उनी थप चर्चामा आएका थिए ।
‘म जनताको नोकर हुँ’ भन्दै आएका उनीमाथि पछिल्लो समय सप्तरीवासीले व्यापक असन्तुष्टि व्यक्त गर्दैआएका छन् । उनले मधेश विरोधी संविधानमा हस्ताक्षर गरेको भन्दै मधेशी जनता उनीप्रति आक्रोशित भएका छन् । मधेश आन्दोलनका क्रममा सेना प्रहरी परिचालन गरी मधेशी जनतामाथि गोली वर्षाएर जारी गरेको संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मधेश विगत दुई महिनादेखि आन्दोलित छ । जारी भएको संविधानमा मधेशी जनताको हक अधिकार सुनिश्चित नगरिएकोले उनीमाथि सप्तरीसहित मधेशका जनताले व्यापक असन्तुष्टि तथा आक्रोश व्यक्त गर्दैआएका छन् ।
यता मधेशको माग सम्बोधन हुन नसकेको अवस्थामा उनी केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा आइतवार सिंचाई मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । सिङ्गो मधेश आन्दोलित रहेको अवस्थामा मन्त्री भएपछि उनको अगाडि चुनौती पनि त्यतिकै छ ।
Previous : राष्ट्रिय मिडिया पत्रकार सञ्जालद्वारा चियापान कार्यक्रम, ‘आन्दोलनमा स्थानीय सञ्चारमाध्यमको भूमिका सराहनीय’
Next : सप्तरीका सांसद यादवलाई सिंचाई मन्त्रीको जिम्मेवारी